Banyere ihe ngosi mmekorita "Ryuko Kawabata vs. Ryutaro Takahashi Collection-Makoto Aida, Tomoko Koike, Takashi Tenmeiya, Akira Yamaguchi-" nke emere site na Septemba 3th (Sat) ruo Nọvemba 9th (Sun) na Reiwa 4 Anyị ga-eme ihe omume nke oge a onye nchịkọta ihe nka Ryutaro Takahashi na okwu ihu ọha nke Yuji Yamashita, bụ onye lekọtara ihe ngosi ahụ.
Ryutaro Takahashi Okwu Omume "Anyasị iji kwuo maka mkpokọta na Ryuko Memorial Hall"
Datebọchị na oge: Satọde, Septemba 3, afọ nke atọ nke Reiwa 9: 25-18: 00
Ihe nkuzi: Ryutaro Takahashi (psychiatrist, onye na-anakọta ihe n'oge a)
Ebe Nzukọ: Ota Ward Ryuko Memorial Exhibition Room
Imecha: Ekwesịrị ịbata na Fraịde, Septemba 9　Ịbịa nnabata agwụla　Ikike: mmadụ 50 (lọtrị ma ọ bụrụ na ikike gafere)
Nkuzi Yuji Yamashita "Asọmpi na Ryuko! -Banyere mkpokọta Ryutaro Takahashi-"
Datebọchị na oge: Sọnde, Ọktoba 3, afọ nke atọ nke Reiwa 10: 24-14: 00
Onye nkuzi: Yuji Yamashita (ọkọ akụkọ ihe mere eme, prọfesọ na Mahadum Meiji Gakuin)
Ebe nzukọ: Ota Bunkanomori Multipurpose Room
Imecha: October 10th (Friday) ikike: mmadụ 8 (lọtrị ma ọ bụrụ na ikike ahụ akarịala)
* Iji gbochie mgbasa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ, anyị na-akwado iyi nke nkpuchi ma tụọ ọnọdụ okpomọkụ n'oge nnabata.
* Dabere na ọnọdụ ọrịa ahụ, enwere ike gbanwee ụbọchị ma ọ bụ nwee ike ịhapụ mmemme ahụ.Biko rụba ama.
* Biko rịba ama na aha na ozi kọntaktị ị tinyere maka ya nwere ike ịnye ndị ọrụ nchịkwa ọha na eze dịka ebe ahụike ọha na eze dị ka ọ dị mkpa.
esi etinye akwụkwọ
Can nwere ike itinye akwụkwọ site na "email" site n'ụdị dị na ibe a.
I nwekwara ike itinye akwụkwọ na "FAX" ma ọ bụ "kaadi ozi na-eme njem".Biko dee aha ihe omume achọrọ "Nkwupụta Okwu" ma ọ bụ "cturekọ", ọnụ ọgụgụ ndị sonyere, aha (furigana) na afọ ndị sonyere, na koodu zip, adreesị, na akara ekwentị ma zipụ ya na ebe ngwà ahụ. (Ihe ruru mmadụ abụọ nwere ike itinye akwụkwọ maka otu)
* Biko dee adreesị gị na aha na nzaghachi akwụkwọ ozi ahụ.
* Biko tinye nọmba faksị nke ị nwere ike ịza.
Ajụjụ / Ngwa
Talọ Ncheta Ota Ward Ryuko 143-0024-4 Central, Ota Ward 2-1
Onye nnọchite anya※
Nwere ike ide maka ihe ruru mmadụ 2. Ọ bụrụ na itinye akwụkwọ site n'aka otu onye, ​​biko hapụ ya oghere.
Oge nnabata chọrọ※
Nkuzi nke Yuji Yamashita (Sọnde, Ọktọba 10, 24: 14-, Ota Bunkanomori
Adreesị ndị nnọchiteanya※
(Ihe Nlereanya) 3-1-3 Shimomaruko, Ota-ku Plaza 313
Nọmba ekwentị nnọchite anya※
(Ọkara obosara nọmba) (Ihe atụ) 03-1234-5678
Adreesị ozi-e na-anọchite anya ya※
A ga-eji ozi nkeonwe gị nyere nanị maka ọkwa banyere ihe ndị mere n'Halllọ Nzukọ Ncheta Ryuko.